Sisiphi isiphelo seFanele yokuThengisa? | Martech Zone
NgoMvulo, nge-16 kaJanuwari, 2012 NgeCawa, Agasti 19, 2012 Douglas Karr
Iindlela zokuthengisa zihlala zenzelwe ukufumana Kaninzi ikhokela okanye ithengise abathengi bangoku. Enye yemicimbi esihlala siyifumana nabaxumi kukuba bahlala besebenza kwisiphelo esingalunganga sefaneli yentengiso. Iinkampani ezininzi zifumana abatyeleli abambalwa ngenyanga kwiwebhusayithi yabo kunokuba bebefuna… kodwa ukuba banakho ukuguqula kabini kuninzi lwezo ndwendwe banazo, baya kuba nempumelelo enkulu.
Uninzi lweetekhnoloji esisebenza nazo zakhelwe ukunciphisa ixesha elifunekayo lokuguqula abaphulaphuli ekujoliswe kubo okanye ukunyusa izinga lokuguqula kwindawo nganye apho i-faneli ivuza khona. Ndihlala ndimangalisiwe kukusibiza ngokuba yifanele… yeyona colander inamathuba amahle avuzayo kuyo yonke indawo. Endaweni yokusebenza ngaphezulu kwefaneli kunye nokuqhuba ngakumbi kukhokelela kwifanele ezele yimingxunya, ungayisebenzisa phi iteknoloji ezantsi kwefaneli?
Nazi ezinye zeetekhnoloji… kubandakanya nabanye babaxhasi bethu kunye nabaxhasi abancedisayo:
Ii-webmasters izixhobo zibonelela ngolwazi olubalulekileyo ukukunceda ukwandisa amaxabiso okucofa kwiinjini zokukhangela. Sele ujonge ukuba kungakanani ukukhangela kwetrafikhi okuzisa kwindawo yakho, kodwa uyazi ukuba ukucofa kwinqanaba kukuluhlu lwakho lwangoku? Ngaba ingaphuculwa?
Iifutshane ze-URL NjengeBit.ly inokukunika idatha oyifunayo ukuze ubone ukuba zisebenza njani na izicwangciso zakho zemidiya yoluntu. Ngaba uyazi ukuba i-Facebook ihluza amangeniso abantu ababonayo besebenzisa Edgerank ialgorithm… kwaye inokubangela okuncinci okanye nokulinganayo nanye kwimizamo yakho yemidiya yoluntu eboniswa?
Iinkampani zokuthengisa ezizenzekelayo njengeLungelo kwi-Interactive kuphuhlisa ubuchwepheshe obufutshane nomjikelo kunye nokubonelela ngeendlela ezikunceda ufumane amanqaku akho ukuze ukwazi ukunxibelelana nabo ngokufanelekileyo kunokuba ibhetshi kunye nokudubula iindlela ezinokuqhuba zikhokelela kwifanele.
Iinkampani zokuthengisa nge-imeyile NjengoDelivra ubonelela nge-imeyile kunye neenkonzo zeSMS ezinokunyusa kakhulu amaxabiso okuphendula kunye nokufundisa abathengi bangoku malunga nendlela iimveliso zabo okanye ishishini-lokwakha igunya, ukugcinwa kunye namathuba okufumana kunye nezikhokelo.
Amaqonga eSaveyi akwi-Intanethi NjengoSurveyMonkey (othenge umthengi wethu, uZoomerang) angakunika ubukrelekrele obufunekayo ukuze uphucule kakhulu iindlela zokuthengisa umxholo. Ngokuphucula umxholo wakho, uyakwazi ukujolisa ngokuthembekileyo ngakumbi kwizikhokelo zokufumana kunye nokuqinisekisa ukuba abathengi bakho banikwa iinkonzo ngokufanelekileyo.
Isindululo seSoftware Izicelo ezinjengeTinderbox zikuvumela ukuba ulungelelanise kwaye uphucule inkqubo yakho yesindululo. Ngokulandela umkhondo iimpendulo zakho kunye nokuqonda indlela onokuthi uziphucule ngayo izindululo zakho, uyakwazi ukuqhuba uguquko ngokukhawuleza nangokukhawulezileyo… lonke elixa usebenzisa izixhobo ezingaphantsi.
Njengoko ujonga intengiso yakho, ziphi iindlela zakho ukuvuza? Endaweni yokuzama ukuqhuba ngakumbi nangakumbi kubaphulaphuli, kunokwenzeka ukuba awusebenzisi abathengi kunye nethemba osele unalo. Kufanelekile ukujongwa!
tags: delivraemail Marketingukuzenzekela ngokuzenzekelayoekunene kunxibelelwanoyokuthengisaisindululo sentengisoIbhokisi yetinder
Imbali yeTekhnoloji eNokuphazamisa ukuThengisa
Jan 17, 2012 kwi-2: 47 AM
Oku kuyinyaniso uDouglas. Kwaye eyona nto iphambili kukuba ndikonwabele ukufunda inqaku lakho kakhulu. ukuqhuba ngakumbi nangakumbi kubaphulaphuli, kunokwenzeka ukuba awusebenzisi abathengi kunye nethemba osele unalo. Inye into endiyifundileyo ngaphambi kokuba ndibengumbhali othengisa kakhulu kwaye kwakude kudala ngaphambi kokuba i-Inc Magazine ivote inkampani yam njengenye yeenkampani ezikhula ngokukhawuleza kukuba ngokusebenzisa ezi teknoloji umntu unokufumana ngakumbi nangakumbi abaphulaphuli kwiwebhusayithi yakhe yokuthengisa kwi-Intanethi.
Jan 17, 2012 kwi-3: 05 AM
Enkosi kakhulu ngamazwi akho anobubele, @DanielMilstein: disqus! Kwaye khawucinge nje ukuba ubuncinci kangakanani ubushushu obunokubakho apho ukuba sigxile ekujikeni izikhokelo ebesinazo endaweni yokugalela uninzi logaxekile phaya.